Firy taona ny fo, firy ny lalana. Iraka: hanjary lehibe sy matanjaka amin'ny indostrian'ny herinaratra nasionaly sy iraisam-pirenena, hanatsara hatrany ny kalitaon'ny olona. Soatoavina: fanarahan-dalàna azo itokisana, miaro ny fanovana. Filozofia momba ny asa: firy taona ny fo, firy ny lalana. Con ...
Inona no atao hoe stabilizer amin'ny herinaratra: ny stabilizer amin'ny herinaratra dia fitaovana amin'ny injeniera elektrika natao mba hitazomana ny herinaratra tsy tapaka. Ny mpandrindra iray dia mety ho endrika "feedforward" tsotra na mety misy fantsona fanaraha-maso ratsy. Fanaraha-maso maotera Servo na fanaraha-maso ny ...
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fihodinam-bola vaovao
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fihodinana vaovao fampiakarana herinaratra, ny famokarana herinaratra sy ny fanovana fitaovana dia hiasa tanteraka ao anatin'ny taona vitsivitsy, mampiseho ny firoboroboan'ny famokarana sy ny varotra ary ny toe-javatra tena mandroso. Amin'ny maha sampana manan-danja amin'ny fampitana herinaratra sy distri ...
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Tips - Vokatra asongadina - Sitemap - Toerana finday Voltage Stabilizer ho an'ny amplifier, Voltage Stabilizer 5000va, Fanamafisam-peo ho an'ny trano rehetra, Fanamafisana ny dizitaly ho an'ny Ac, 2kva Voltage Stabilizer, 4kva Voltage Stabilizer, Vokatra rehetra